Doorasho ma muuqato ee naftiina difaaca - M. Salaad | KEYDMEDIA ENGLISH
Doorasho ma muuqato ee naftiina difaaca - M. Salaad
Sida muuqata ilaa hadda, Farmaajo, kuma jiro, wax olole doorasho ah, xilli, ay magaalada Muqdish ku sugan yihiin in ka badan 200 oo xildhibaan, haddana wuxuu saacad saacad ula kulmaya saraakiil ciidan, taas oo muujineysa in uusan u socon wax doorasho ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, oo ka mid ah mucaaradka shanti sano ee la soo dhaafay sida adag uga soo hor jeeday Farmaajo, ayaa sheegay in Madaxweynihii hore wado qorshe ciidan aruursi ah, xilli loo diyaar garoobayo doorashooyinka kuraasta ugu sarreysa dalka.
Mahad Salaad, wuxuu sheegay in Farmaajo wado is-baddello uu ku sameynayo qaar ka mid ah saraakiisa ciidanka, isla-markaana uu xilalka ka qaadayo, taliyeyaasha hoose ee ciidanka QS, si uu meesha uga saaro taliyeyaashii ka aragtida duwanaa xiligii Badbaado Qaran.
Xildhibaan Mahad, wuxuu bannaanka keenay, guux dhawaanhaan ka soo dhex baxayay ciidanka xoogga, kasoo ahaa in Farmaajo habeen kasta la kulmo, saraakiil ciidan, kaliyana uu ka shaqeynayo, abaabula qalalaaso hor leh, si ay dib ugu dhacaan doorashooyinka.
Mahad Salaad, wuxuu xusay in ay jiraan xogo sheegaya in ay socdaan maleegidda qorshayaal lagu khaarijinayo siyaasiinta qaar iyadoo la adeegsanayo gacmo kale, [Kooxda Al-Shabaab], kuwaas oo loo adeegsay fulinta weerarkii Afisyoone iyo dilkii Xil; Aamino.
“Doorasho sooma muuqato ee naftiina ha dayacinina”, ayuu yiri, Xildhibaan Mahad, oo farriin u dirayay musharixiinta u taagan xilka ugu sarreeya dalka iyo xildhibaannada is baddel doonka ah ee ka aragtida duwan kooxda waqtigu ka dhamaaday.
Xogo sirdoon oo warbaahinta qaar ka heshay, diblumaasiyiin ajanabi ah, ayaa sheegaya in dalalka Kenya, Itoobiya iyo Imaaraadku, billowgii todobaadkaan wadaageen xog ah in Farmaajo uusan doorasho u socon, taas baddalkeeda uu dagaal u diyaar garoobay.
Farmaajo, wuxuu doonayaa in loo daayo maamulka 16 kursi oo taalla Garbahaarrey, si uu kuraastaas ugu qoro shaqsiyaad uu isagu wato, waxuuna wax kasta ku bixinayaa in aan doorashada Guddoonka Golayaasha la dooran inta ay ka soo baxayaan kuraasta Gedo.
Ra’iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa maanta sheegay, in loo diyaar garobayo dhaarinta xildhibaannada, si ay u doortaan Hoggaankooda, halka safiirka Mareynaka Larry Andre, uu maanta sheegay in aan loo baahneyn kuraasta dhiman.